भर्खरै सरकारले साे,च्दै न,सोचेको निर्णय लियो एमसीसी बारे पूरा पढ्नुहोस्…. – Dainik Sangalo
भर्खरै सरकारले साे,च्दै न,सोचेको निर्णय लियो एमसीसी बारे पूरा पढ्नुहोस्….
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र २३, २०७८ समय: १७:५१:०३
गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायहरुलाई “उच्च सतर्कता” मा रहन निर्देशन दिएको छ किनकि सरकारले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) जसरी भएपनि संसदबाट अनुमोदन गर्न तयार छ। एमसीसी संसदमा अनुमोदनको लागि पेश भएपछि देशव्यापी आ,न्दोलन बढ्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी मन्त्रालयले चारै सुरक्षा निकायहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको छ।
त्यहाँ सामान्यता बाहिर केहि स,मस्याहरु हुन सक्छ।यस महिना भर उच्च स,तर्कता मा रहदै, MCC को बि,रुद्ध आ,न्दोलन अब चलिरहेको छ, भारत वि,रोधी आ,न्दोलन पनि बढ्न सक्छ। दिमागमा यी मुद्दाहरु संग, त्यहाँ सुरक्षा स्थिति सुदृढ बनाउन को लागी एक निर्देशन छ, ‘एक वरिष्ठ सुरक्षा स्रोतले भने।
यो पनि पढ्नु हाेस..,…………….
फातिमा सुमारको प्लेकार्ड बोकेर युवाहरुद्वारा एमसिसीको विरोध !!
अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) को विरोधमा काठमाडौँको मीनभवन क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन भएको छ ।
उन्मुक्त पुस्ताको आह्वानमा युवाहरुले बुधबार प्रदर्शन गरेका हुन् । केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । एमसिसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आउने तयारी रहेका बेला युवाले प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनकारीमध्ये केहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
प्रदर्शनकारीले सुमार र एमसिसीको विरोध गरिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । सरकारले विदेशी दातृ निकायको विरोध नगर्न चेतावनी दिए पनि दिनहुँ जसो एमसिसीविरुद्ध प्रदर्शन हुँदै आएको छ । बुधबार नै एसमिसीको विरोधमा नयाँ बानेश्वरमा पनि प्रदर्शन भइरहेको छ।
गत वर्ष असार १६ गतेभित्र संसदबाट पारित भइसक्नुपर्ने एमसिसी अझै पारित हुन सकेको छैन। परियोजनाले अमेरिकी हस्तक्षेप बढाउने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।
अमेरिकाले पाँच वर्षभित्र जलविद्युत र सडकमा लगानी गर्ने गरि परियोजनामार्फत ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैछ। तर सो परियोजना देश हितमा नरहेको भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको हो ।
Last Updated on: September 8th, 2021 at 5:51 pm